အာဂျင်တီးနား လွှတ်တော်မှ လူနည်းစု မွတ်စလင်များ ရပိုင်ခွင့်အတွက် ဥပဒေသစ်ထုတ်ပြန်ပေး | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
အာဂျင်တီးနား လွှတ်တော်မှ လူနည်းစု မွတ်စလင်များ ရပိုင်ခွင့်အတွက် ဥပဒေသစ်ထုတ်ပြန်ပေး
ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ၊၂၀၁၂
ဗျူနိုစ်အေရိစ်။ ။ အာဂျင်တီးနားလွှတ်တော်သည် လူနည်းစု မွတ်စလင်များ ရပိုင်ခွင့်အတွက် ဥပဒေသစ်တစ်ရပ် ပြဌာန်းပေးလိုက်သည်။ အာဂျင်တီးနား မွတ်စလင်တို့သည် အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံသားဖြစ်ရသည်ကို ဂုဏ်ယူလျက်ရှိပြီး ၄င်းတို့၏ ရပိုင်ခွင့် ဤဥပဒေသစ်သည် ၂၁ ရာစုအတွင်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် မွတ်စလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအား မျက်နှာသာမပေးဘဲ မတရားခွဲခြား ဆက်ဆံမှုများ အားလုံးကို စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဗျူနိုစ်အေရိစ် မြို့မှ လက်တင် အမေရိကရှိ အကြီးဆုံး ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နှင့် Islamic Centre
ဗျူနိုစ်အေရိစ် မြို့ အောက်လွှတ်တော် တွင် “ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အစ္စလာမ်” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အစည်းအဝေးတွင် ဥပဒေ အရာရှိများ ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ၊ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ Julian Doninguez ၊ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ သံအမတ် အတွင်းရေးမှူး Guillermo Oliveri နှင့် အာဂျင်တီးနား ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ အစ္စလာမ့်အဖွဲ့အစည်း အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး Sumer Noufouri တို့သည် ဥပဒေသစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်များထက် ယခုအခြေအနေသည် “ထိရောက်သော တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု” ဟု အလေးပေးပြောကြား သွားခဲ့သည်။
မွတ်စလင်လေးသိန်းခန့်ရှိသော အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသည် တောင်အမေရိကတိုက်တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံပြီးလျှင် မွတ်စလင် အများဆုံးနိုင်ငံများ အနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပဒေအသစ်တွင် ပါဝင်သည့် မွတ်စလင် အမျိုးသမီးများသည် အများပြည်သူ သွားလာရာ နေရာများတွင်သာမက ၄င်းတို့၏ မှတ်ပုံတင်(ID card) များတွင်ပါ ဟီဂျဗ်(ပုဝါ) ၀တ်ဆောင်းခွင့် ပြုလိုက်ခြင်းသည် အစ္စလာမ်တို့၏ ယုံကြည်မှု နှင့် နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများအကြား လွန်ဆွဲစရာမလိုဘဲ “ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးနိုင်ငံ” များရဲ့ မွတ်စလင်တို့အပေါ်တွင် တဖက်စောင်းနင်း လူမျိုးရေး ဆန့်ကျင်မှု များ ကို ငြင်းဆန်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည် ဟု အာဂျင်တီးနားသမ္မတ Cristina Fernandez က ဂုဏ်ယူစွာပြောကြားခဲ့သည်။
အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော် သည် ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုနှင့်လွှတ်တော်အတွင်း မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်များ တည်ရှိပါဝင်နေသောကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တို့၏ မြင့်မြတ်ခိုင်မာသော ရပ်တည်မှု တန်ဖိုးသည် နိုင်ငံအတွက် အားအင်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်၏ အတူယှဉ်တွဲ၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ တည်ရှိမှုကို ဖော်ဆောင်သော နိုင်ငံတကာ ဥပမာတစ်ရပ် ပင်ဖြစ်သည်။ ။
ကိုးကား။ ။ http://www.presstv.ir/
This entry was posted on December 19, 2012, in နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရိုဟင်ဂျာလှေစီးဒုက္ခသည် ၂၇၃ ဦးပျောက်ဆုံးနေ
“ သတိ” အမှား နှင့် အမှန်ဆိုတာ “မ”ဟပ်ထိုးအထိတော့ အတူတူပါပဲ (ကဗျာ) →